PCT Letrozole powder --- Zvinhu zvishanu ndinofanira kuziva !!! | AASraw
/Blog/Letrozole/PCT Letrozole poda yakasviba-Zvinhu zvishanu ndinofanira kuziva !!!
Posted on 11 / 05 / 2017 by 阿斯劳 akanyora Letrozole.
Q1: Is Letrozole mbiriso yakasviba steroid?
A1: Letrozole poda yakasvibirira, iyo yakagadzirwa steroid powder yeLetrozole, inonzi Hormore, kwete steroid, ndeyePCT series, vamwe vakaita Tamoxifen,Clomid,Aromasin,
Halotestin, Anastrozole, Heinoi mashoko anokosha:
Melt Point: 181-183 ° C, Ruvara: Chena kana kubvisa chena rystalline upfu, vanhu vanotenga Letrozole inowanzo chengetwa mukamuri tembiricha.Chinofananidzwa nemamwe mafomu, Letrozole poda yakakurisa, yakachena kuchena, yakakura quatity, yakaderera mutengo, zvinoenderana nevazhinji vashandisi , Ndiani akambotenga pamhepo kare, magiramu gumi ehupfu anogona kugadzira zviuru zvemapiritsi / mapiritsi.
Q2: Iro Letrozole poda yakashandiswa pakushandisa kenza yepabonde here?
A2:Letrozole poda yakasviba poda inozivikanwa pakati pevakadzi, inoshandiswa semushonga weanorwisa-kenza yemazamu, asi hazvisi zveizvi chete, Zvakare Letrozole inoshanda mukuvaka muviri, inoonekwa seimwe yemishonga yakanyanya kukurudzira muviri wemuviri uye kusimudzira kupisa kwemafuta. Inobatsirawo mukuderedza mazinga eLDL (akaipa) cholesterol nekusimudzira hutachiona hwevarume vane chirwere chinotapukira ne-non-obstructive azoospermia uye vanobata endometriosis. Chizvarwa chechitatu chinosarudzwa chinonzi aromatase inhibitor, Letrozole inobatsira, chinoshandiswawo kukurudzira kukurudzira kunoshamisa kuburikidza nekukura kwehomoni, cortisol, SHBG, kushandiswa kwemaitiro emaprotini anosunga, HDL, uye kukura nekuvandudzwa kwehutano hwepabonde. Kana izvo zvisirizvo zvose, Femara zvakare ane kodzero yekusimudzira utano hwakanaka hwehutachiona hwehutano, hutano hwehutano hwehutano, hutano hwakabatana, cognitive function, uye musimba mukukura apo kuderedza kana kubvisa zviratidzo zveesrogenic zvakadai seganda rine mafuta, gynecomastia, uye kuchengetedza mvura
Q3: Isrozole poda yakashandiswa seAI yakanaka chioce?
A3: Kuwanda kwekushanda kunowedzera vatambi pavanosarudza aromatase inhibitor kune kazhinji zvitatu zvinowanzosarudzwa; Arimidex, Aromasin uye Letrozole uye imwe neimwe yakafanana zvikuru mukuita. Chinangwa che aromatase inhibitor chinonyanya kurara mukati mezita pacharo; kuti inhibit the enzyme aromatase. Kune steroid user iyi inokosha zvikuru sezhinji anabolic androgenic steroids ichaita kuti vanhu vashandise ku estrogen nenzira iyi. Iko kutendeuka nekuvakwa kweestrogen kunogona kutungamirira kune dzakawanda zvisingabvumirwi nemigumisiro, saka Letrozole inoshandiswa nekudzivirira huwandu hwewesrogen, kuderedza kusvibisa muviri wedu.
Q4: Ko letrozole yakawanda sei ini ndinotora?
A4: Muyero wepamusoro weLetrozole uyo mushandisi angade kushandisa angave 2.5mgs pazuva. Izvo zvakaratidzirwa muzvakawanda zvidzidzo kuti muyero uyu uchabvisa ingangoita yese yesrogen mumuviri mune vangangoita vanhu vese. Chero chipi chipimo chakakwirira kupfuura ichi chingangove chisina kudikanwa. Kunyangwe paine mukana wekuwedzera huwandu hwe lutenizing hormone, follicle inosimudzira mahormone, uye bonde mahormone anosunga globulin muvashandisi Letrozole inogona kunge isinganetsi kana ikashandiswa panguva yekurapa-kutenderera kurapwa. Izvi zvinokonzerwa nekugona kwekomboni kutyaira esrogen mazinga akaderera kwazvo panguva yekushandiswa. Kamwe mukomboni paakamiswa izvi zvinogona kukonzera "rebound mhedzisiro" mumatanho eestrogen neaya kuve akakwirira zvakanyanya, chimwe chinhu chinofanirwa kudzivirirwa panguva kana mushure mekutenderera-kutenderera kurapwa.
Q5: Chii chinogona kuitika kana kupfuura?
A5: Hapana mubvunzo pamusoro pacho, kuderera kwemaitiro eesrogen kunobatsira mukuoma muviri uye kunyanya kuderedza kunogona kutungamirira kune dambudziko.
Letrozole inogona kuoma uye kuoma muviri unonyanya kuisiya uchitsemuka uye usina kutarisa mukuonekwa.
Nokudaro, iyo inoronga sei kudya kwavo pavanoshandisa mishonga yakadai mubvunzo waunofunga pamusoro, chaizvoizvo, kudya kune chokwadi chaicho pamusoro pekushanda kwekugadzirisa nekugadzirisa kuyananisa.
Uyewo, Kuwedzererwa kweLetrozole yakasviba yakasvibiswa kuchaita kuti mazinga e-estradiol ari pasi, izvo zvingaguma nemigumisiro yakaipa yemararidhi, kuora mwoyo, kurwadziwa pamwe chete, kana kupfeka-kuonekwa musculature. Kana ikasununguka paunenge uchishandisa steroid inogadziriswa sa testosterone kana Dianabol, zvisina kukodzera high estradiol zvakare inogona kukonzera kurasikirwa kwe libido kana kuora mwoyo, kunogona kukonzera kugadzirisa mvura, uye kunogona kukonzera kana kukurisa gynecomastia.
Chii chinoshandiswa Nandrolone decanoate injection? PCT mishonga yekudzosa -Nolvadex, Clomid, Letrozole, Aromasin, Halotestin